Indlela yokwazi ukuba indoda idiniwe nguwe | Amadoda aseStylish
UAlicia tomero | 12/11/2021 23:14 | Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Kubudlelwane obuninzi umfazi angadibana nokungaqiniseki ukuba umntu wakho udiniwe yobudlelwane babo njengesibini. Akukho nto ibuhlungu ngakumbi ukuba kusekho iimvakalelo kwaye nangona ungabi nabuganga bokunikela inyathelo lokubuza, ukhetha ukulinda ukuba yonke into iya kusonjululwa njani.
Ukunqongophala komdla kwelinye lamacandelo esi sibini kunokubangelwa yinto enkulu monotony okanye ukungabi namdla. Eyona nto imbi kakhulu xa ubudlelwane bunokuhlala ixesha elide kuba alunakwaphulwa ikakhulu ngenxa yokuncamathela okukhulu. Xa ibhinqa lisenokuba libandezelekile ngenxa yothile ongaphindiswayo, lifanele lizibekele umda dala kwaye ulawule ukuzithanda kwakho. Ngoko ke, kufuneka wohlukane naloo mntu ungakuthandiyo.
1 Singazi njani ukuba indoda ayisekho nomdla kwi relationship
1.1 Unxibelelwano lomzimba lulahlekile
1.2 Akanabubele kwaye akazikhathalele iingxaki zakho
1.3 Iyamkhathaza lento uyenzayo?
1.4 Akanyanisekanga kwindlela avakalelwa ngayo
1.5 Akasenzi zicwangciso nawe
1.6 Xa nidibana ukuba niphume uyadikwa
Singazi njani ukuba indoda ayisekho nomdla kwi relationship
Ingxoxo-mpikiswano inokwahlukana ibe ziindidi ezimbini zeenyani. Sinokwazi uhlobo lobudlelwane babantu ababini xa bengahlali kunye, kodwa bagcine ubudlelwane bokuthandana. Okanye sinokudibana ubudlelwane obuzinzileyo kunye nokhuseleko kwiminyaka emininzi kwaye apho ezi zimbini zihlala phantsi kophahla olufanayo. Ngaphambi kokuba nayiphi na kwezi ntlobo zimbini zobudlelwane sinokuzifumana loo ndoda idiniwe ukwabelana ngothando lwayo kwisibini sakho. Kule meko, abafazi banokuxabisa oku kungathandeki ngoluhlu lweengcebiso ukuze ukwazi ukugcina loo miqondiso.
Unxibelelwano lomzimba lulahlekile
Akukho qhagamshelwano okanye sele lulahlekile. Ngokuqinisekileyo eyakho ukusondelelana ebhedini kuye kwathoba inqanaba, zombini ngentshiseko kumgangatho kunye nobungakanani. Ngoku iindibano ziyenzeka manqaphanqapha kwaye akusafani nakuqala. Unokuqiniseka ukuba ujonge wena kuphela ngesondo kwaye uthando ebelunikezela kuwe ngoku lubanda kakhulu.
Akanabubele kwaye akazikhathalele iingxaki zakho
Ngoku akasakuthembi ukuba wenze umsebenzi wakhe wesikolo, njengoko esoloko esenza. Umgama sele uqalile ukubonakala kwaye akanciphisi negxalaba ukuba akuxelele into ayenzileyo emini. Kodwa ayizizo kuphela ezi nkcukacha, umfazi ufuna intuthuzelo kwaye uxela uhlobo lwengxaki adibene nayo kwaye akaviwa. Indoda ayinamkhethe ngakumbi kwaye ayisayi kunika ukubaluleka kwiingxaki zobudlelwane, nangona kunjalo kuye.
Iyamkhathaza lento uyenzayo?
Esinye isizathu esinokubonisa ukungabi namdla kwabo kuxa yonke into oyithethayo okanye oyenzayo ibakhathaza. Incoko inako gqibela kumlo omncinci, kukho ukungqubana kwezimvo kwaye kukho ukungqubana nangaliphi na ixesha. Isenokuba sesinye sezizathu ezicacileyo zokuba ukhangela izizathu ukuthethelela umgama wabo.
Akanyanisekanga kwindlela avakalelwa ngayo
Le yenye ingxaki enokuthi ivele. Indoda ingaba indawo yokuphila, funa intuthuzelo yakho kwaye awusathandani neqabane lakho. Ukunyaniseka kwaye uthi akukho nto uziva ngayo ayizukwenzeka. Baya kuxoka kuwe ukuba injongo yabo kukubonisa ukuba balahlekelwa ngumdla ekuhambeni kwexesha.
Akasenzi zicwangciso nawe
Hlala ubaleka kulo naliphi na icebo ukuba kwenziwe njengesibini okanye ubuncinane, phantse wonke umntu. Uya kwenza izizathu ezinjengokuthi udiniwe okanye ufuna indawo kuye, kodwa eyona nto ifika xa kukho into ecetywayo ngaphandle kwaye angavumi. Ukuba akukho kuhlalisana, kunokuqatshelwa xa akasabandakanyi kwizicwangciso zakhe, osoloko enezinto azenzayo okanye onocwangciso olungqongqo kakhulu.
Xa nidibana ukuba niphume uyadikwa
Ukuba uphawula ukuba mva nje ukruqukile kwiintlanganiso zenu, oko akungophawu oluhle. Sele Awuthethi kwamnandi okanye yonke into omxelela yona ibonakala ikruqula. Ngapha koko, inokuchazwa ukungabi namdla kwakho Xa ejonga wonke umntu ngaphandle kwakho, ude ajonge nabanye abafazi.
Xa umntu ekuthanda, ujonge kuphela ukwabelana nawe ngawo onke amaxesha akhe, kuba ekukhumbula kwaye ecinga ngawe kakhulu. Xa loo mntu ebengumfanekiso ogqibeleleyo kwaye uqala ukuqaphela ukuba indlela abasabela ngayo kuwe ayilunganga, kuya kufuneka ukwenze kucace ukuba kukho ukungangqinelani.
Ukuqala, kuya kufuneka wenze oko iya kusabela kuzo naziphi na izimvo zakho, ukuba uqaphela ukuba umgama kwaye ukuba ayilungiswanga kuthetha ukuba ulahlekelwa nguwe. Ukuba unyanisekile kwaye ukuxelela ukuba udiniwe nguwe, ayikho enye into ongayenza apha. Kodwa mhlawumbi awukhange uwuphawule loo mgama kwaye awuyazi loo nto yenza ikhefu. Kweli nqanaba le ngxaki inokulungiswa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Indlela yokwazi ukuba indoda idiniwe nguwe